फिर्ती नीति -
This policy governs your purchase of ExactSpy – the smartphone monitoring application. यसलाई ध्यान दिएर आफ्नो खरीद को सम्बन्ध मा आफ्नो अधिकार बाहिर सेट रूपमा आफ्नो क्रम समाप्त पढ्न गर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण सीमितता र बहिष्करण सहित. एक क्रम तपाईंको नियुक्ति आफ्नो क्रम यो नीति छ भनी आफ्नो सम्झौता गठन.
तपाईं सफ्टवेयर र सेवा को आफ्नो खरीद पूर्णतया सन्तुष्ट छैन भने, के तपाईं अगाडी तल सेट नियम र शर्तहरू मा फिर्ता आफ्नो पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, हामी तपाईं हाम्रो विशेषज्ञहरु देखि व्यावसायिक सहयोग पाउन भने फिर्ती को सबै भन्दा रोक्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्.
राशि फिर्ता CONDITIONS
यस Refund नीति अवस्थामा विषय, तपाईं भित्र एक पूर्ण फिर्ती प्राप्त गर्न योग्य हुन सक्छ5आफ्नो खरीद को दिन निम्न दिन प्रदान Refund नीति अवस्थाको बाझिएको छैन कारण.
यस फिर्ती अवधि मा छ पछि कुनै फिर्ती उपलब्ध हुनेछ.
हामी केवल आफ्नो मन परिवर्तन को लागि फिर्ती जारी छैन. तपाईं हाम्रो सफ्टवेयर संग प्राविधिक समस्या अनुभव भने, हामी एक समय मा यी विवादहरू समाधान गर्न काम गर्नेछ. यी विषयहरूमा समाधान गर्न सकिँदैन भने, सफ्टवेयर दोषपूर्ण सिद्ध छ भने तपाईं एक फिर्ती प्राप्त गर्नेछौं. तपाईं हामीलाई खतरामा पारिरहेका छन् भने हामी एक आदेश र बंद समर्थन र सेवा फिर्ता गर्न सही रिजर्भ वा हामी तपाईं मनाही उद्देश्यको लागि सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ निर्धारण.
कुनै फिर्ती आफ्नो iPhone र / वा iPad JailBreak गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक या त छ जो कुनै पनि ग्राहक जारी गरिनेछ. यो वेबसाइट मा iOS स्थापना गाइड पृष्ठ स्पष्ट सबै iPhones र / वा iPads पूर्व स्थापना गर्न र पनि jailbroken हुनुपर्छ भनेर रूपरेखा, खरीद घडीमा, ग्राहक यो आवश्यकता गर्न सहमत.
एक ग्राहक यो सफ्टवेयर खरीद र अप्रतिबंधित पहुँच छैन भने (ताले सहित, passcodes, आदि) फोन गर्न अनुगमन गर्न, हामी कारण यो अवस्था गर्न फिर्ती को लागि उत्तरदायी छैनन्.
एक लक्ष्य फोन प्रयोगकर्ता आफ्नो वाहक परिवर्तन र यो इन्टरनेट जडान को आंशिक वा पूर्ण क्षति परिणाम भने, updates OS or restoring to factory settings and consequently incorrect ExactSpy functioning, कुनै फिर्ती पनि जारी गरिनेछ.
तिनीहरूले कुनै पनि फिर्ती आफ्नो सही नगुमाउन हुनेछ त्रुटि वा पेश धोखाधडी जानकारी मा एक खरीद गरे र सम्झौता को लागि सबै शुल्क लागि उत्तरदायी आयोजित गरिनेछ दाबी गर्ने कुनै पनि ग्राहक. तपाईं एक नयाँ सदस्यता बिलिङ चक्र प्रवेश कि एक पल्ट सजग हुन गर्नुहोस्, फिर्ती कि नयाँ समय अवधि लागि दिइने छैन.
विवाद अवस्था मा राखिन्छ कि सबै आदेश लागि, तपाईं छ 14 अवधि दिन हाम्रो ग्राहक सहायता दल संग परिस्थिति समाधान गर्न. तपाईं प्रदान समय भित्र आवश्यक जानकारी वा प्रतिक्रिया प्रदान गर्न असफल भने, विवाद रद्द गरिनेछ र कुनै फिर्ती त्यसपछि सम्भव हुनेछ..